Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Kurt Zouma Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Banyere Ndụ
LB na - ewetara ndị zuru ezu Akụkọ banyere otu egwuregwu bọọlụ ama ama na French na aha njirimara “LaZoumance".
Akụkọ nwata anyị Kurt Zouma gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha a gụnyere oge ndụ ya, nzụlite ezinụlọ, ndụ onwe onye, ​​eziokwu ezinụlọ, ụdị ndụ ya na obere ihe ndị ọzọ amaara ama gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ike ya, ikike ịgụ egwuregwu na ọnụnọ ikuku. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Kurt Zouma's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Kurt Zouma nke nwata - Mmalite Ndụ na Ezin’ụlọ:
Malite na, Kurt obi ụtọ Zouma mụrụ na ụbọchị 27 nke October 1994 na Lyon na France. Ọ bụ otu n'ime ụmụaka 6 amụrụ nne amatachaara ya na nna ya, Guy Zouma.
Nna Kurt Zouma - Guy. Ebe E Si Nweta Foto: 5foot5.
A zụlitere mba French nke agbụrụ Black na mgbọrọgwụ Africa na ebe amụrụ ya na Lyon, France ebe o toro n'akụkụ nwanne nwoke nke okenye amatara dị ka nwanne nwanne Lionel na 4.
A zụlitere Kurt Zouma na Lyon na France. Ebe E Si Nweta Foto: FPCP na WorldAtlas.
Na -etolite na Lyon, Zouma na -eto eto enweghị mmasị na egwuregwu bọọlụ. N'ezie, ọ họọrọ ịkụ basketball.
Ka ọ na-erule oge Zouma dị afọ 9, ọ nwara ịgba bọọlụ na Vaulx-en-Velin mpaghara wee chọpụta na ọ mara oke mma na ya.
Akụkọ Kurt Zouma Akụkọ nke na - Nkụzi na Ọrụ:
N'oge na-adịghị anya mgbe Zouma malitere igwu egwu Vaulx-en-Velin, o kwere ndị mụrụ ya nkwa na ọ ga-eme ya n'egwuregwu ahụ.
N'ihi ya, ọ rụsiri ọrụ ike iji nwee ihe ịga nke ọma n'egwuregwu ahụ na -atụle ebumnuche dị elu nke ime ka ndị mụrụ ya dị mpako.
Kurt Zouma - 3rd site n'aka ekpe na ahịrị nke abụọ - na klọb nwata nwoke bụ Vaulx-en-Velin. Ebe E Si Nweta Foto: FPCP.
Mgbe ọ nọ na Vaulx-en-Velin, Zouma nwere agụmakwụkwọ zuru oke na nrụpụta ọrụ ya na bọọlụ nke hụrụ ya nwalee ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche tupu ọ biri dị ka onye na-agbachitere ya.
N'ime oge ọzụzụ isii, Zouma sonyeere Mahadum Saint-Étienne dị ka 15 afọ na 2009.
Akụkọ ndụ nwata Kurt Zouma - Ndụ Ndụ Mbụ:
Ọ bụ na Vaulx-en-Velin ka Zouma kwupụtara ikike ịgbachitere ya ma depụta usoro meteoric site na usoro ndị ntorobịa. Ofzọ egwuregwu ya pụrụ iche dọtara uche nke ndị ọrụ klọb ndị chọrọ ibuli ya elu tupu oge 2011-12.
Kurt Zouma - nke atọ site n'aka ekpe na ọnọdụ ya - na ịrị elu na Vaulx-en-Velin. Ebe E Si Nweta Foto: FPCP.
Yabụ, Zouma bịanyere aka na Saint-Étienne na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na 2nd nke Eprel 2011 wee mee ọkachamara ọkachamara maka ndị otu mbụ n'oge egwuregwu Coupe de la Ligue megide Bordeaux na 31st August 2011.
Ọ gara n'ihu nyere aka merie Saint-Étienne iji nweta akara Coupe de la Ligue na 2013 wee na-atụ anya ọrụ ga-ekwe nkwa na klọb ndị elu.
Kurt Zouma Bio - Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
Zouma chọrọ itolụ elu na 2014 mgbe ọ banyerela na bekee English Chelsea na nkwekọrịta afọ ise na ọkara na-eru nde 12 nde (€ 14.6 million).
Otú ọ dị, ọpụpụ onye ọkpụkpọ ahụ nwere obi ụtọ na klọb ahụ na ọchịchọ ịme ka ọ bụrụ onye mbụ maka blu ahụ abụghị ọsọ ọsọ dị ka ọ tụrụ anya n'ihi na Chelsea gbazinyere ya na Saint-Étienne maka oge ndị ọzọ.
Chelsea gbazinyere Kurt Zouma's ka Saint-Étienne mgbe ọ bịanyere aka na ya na 2014. Ebe E Si Nweta Foto: Sportsmole.
Akụkọ ndụ Kurt Zouma - Bilie ka ewu ewu Akụkọ:
Onye na-agbachitere etiti mechara mee euphoric mpụta mbụ ya na Chelsea na mmemme enyi tupu Wycombe Wanderers.
N'ịbụ onye nwere nọmba Jersey 5, ọ wepụrụ nnukwu ihe ịga nke ọma na mkpọsa mbụ ya zuru oke site n'inyere Chelsea aka imeri iko League na Premier League na 2015.
Kurt Zouma meriri aha Premier League na Chelsea na 2015. Ebe E Si Nweta Foto: NyefeeMarket.
Ngwa ngwa ngwa ruo taa, Kurt Zouma bụ onye otu ama ama ama na Chelsea FC ma kọwaa ya dị ka "onye agbachitere kachasị" maka ọsọ ya, wụlikwa elu, gafere, ịgba égbè na nka nka. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwunye Kurt Zouma na Childrenmụaka:
Kurt Zouma lụrụ nwanyị n'oge edere. Anyị ewetara gị eziokwu gbasara akụkọ okike ya na ndụ alụmdi na nwunye. Iji malite, a maghị Zouma nwere nwanyị ọ bụla tupu ya ezute Sandra nwunye ya.
Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
Ọkara ka mma bụ onye mba France wee tọọ Zouma afọ abụọ. Zouma dị afọ 19 mgbe ọ lụrụ ya na 2012.
Alụmdi na nwunye ha na -esiwanye ike ma jiri ụmụ abụọ gọzie - nwa nwoke na nwa nwanyị - n'oge edere.
Kurt Zouma na nwunye ya na ụmụ ya. Ebe E Si Nweta Foto: TheSportReview.
Ndụ ezinụlọ Kurt Zouma:
Kurt Zouma sitere na ezinaụlọ nke obere ụlọ. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere nna Kurt Zouma:
Aha nna Zouma bụ Guy. Ọ bụ onye mba Central African Republic nke kwagara France na -achọ ahịhịa ndụ ahịhịa ndụ ọtụtụ afọ tupu amụọ Zouma.
Mgbe ọ nọ na France, Guy rụsiri ọrụ ike inye ezinụlọ ya ihe ma na -anyakarị Zouma ọzụzụ. Kurt toro nna na -akwado ya maka ịmara mgbe ọ ga -akpachapụ anya ma nwee ọmịiko n'ebe ụmụ ya nọ.
Nna Kurt Zouma, Guy. Ebe E Si Nweta Foto: 5foot5.
Banyere nne Kurt Zouma:
Zouma nwere obere nne a ma ama nke rụrụ ọrụ dị ka onye nchacha. Ọ na-egosipụta nnukwu mmasị n'egwuregwu Zouma ma nọrọ ya mgbe onye na-agbachitere etiti bịanyere aka na St. Etienne na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya mgbe ọ dị afọ 16.
Ka a sịkwa ihe mere na ọ nweghị ike ijide anya mmiri ọ Joyụ mgbe ekwuputara na Zouma bịanyere aka na Chelsea na 2014. Nne na -akwado ya na -adụ Zouma ọdụ mgbe niile ka ọ gbado anya na egwuregwu ya wee bụrụ onye kacha akwado ya.
Banyere nwanne Kurt Zouma:
Kurt nwere ụmụnne 5 nke gụnyere nwanne nwanyị amachaghị banyere ya. Agbanyeghị na Zouma na -eso ha enwe mmekọrịta chiri anya, ọ nọ nso nwanne ya nwoke nke okenye bụ Lionel onye kpaliri ya igwu egwuregwu bọọlụ. Lionel na-egwuri egwu maka Bourg-en-Bresse ọkwa nke atọ n'oge edere.
N'aka nke ya, Zouma na -arụ ọrụ dị ka ihe mkpali nye nwanne ya nwoke nke obere bụ Yoan onye na -egwuri egwu maka Bolton Wanderers.
Kurt Zouma ya na umuaka. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Banyere ndị ikwu Kurt Zouma:
N'ebe ezinụlọ Zouma dị, amachaghị banyere nne na nna nna ya yana nna nna na nne nne.
N'otu aka ahụ, amachaghị ọtụtụ ihe banyere nwanne nna Zouma, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya ebe amabeghị ụmụ nwanne ya n'ihe omume ama ama nke ndụ nwata ruo taa.
Ndụ Kurt Zouma nke Onwe:
Kedu ihe na-eme Kurt Zouma akara? Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ịme nke ụdị onye ọ bụ iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Iji malite, onye Zouma bụ ngwakọta nke àgwà Scorpio zodiac.
Ọ na -anụ ọkụ n'obi, na -arụsi ọrụ ike, nwere ọgụgụ isi ma na -ekpughere nke ọma eziokwu metụtara ndụ onwe ya na nke onwe ya.
Ọ nwere mmasị na ihe omume ntụrụndụ ole na ole gụnyere igwu egwuregwu vidiyo, ilele oge, ijigide egwuregwu basketball, ime njem na isoro ndị enyi na ezinụlọ nọrịa.
Kurt Zouma na-ekiri ihe nkiri dị ka ọrụ mmemme.
Ndụ Kurt Zouma:
Kurt Zouma nwere ọnụọgụ atụmatụ ruru ihe karịrị $ 5 Nde n'oge edere. Isi mmalite nke akụnụba ya sitere na ụgwọ ọrụ ọ na-enweta site na mbọ ọrụ football ya yana ọrụ nkwado ya.
N'ihi nke a, a na-enye nkwado azụ maka itinye ego buru ibu ma nwee akụ nke na-ekwu okwu ọma gbasara ụdị ndụ obibi ya dịka ụlọ obibi ya na Lyon na France yana ụgbọ mmiri ndị nwere nnukwu ụgbọ ala gụnyere Porsche Panamera n'etiti ndị ọzọ.
Kurt Zouma sere na otu n'ime ụgbọ elu ya.
Eziokwu Kurt Zouma Eziokwu:
Iji chịkọta akụkọ ụmụaka anyị na Kurt Zouma na akụkọ ndụ ya, ndị a bụ eziokwu ndị agabeghị na akụkọ ndụ ya.
Enyere Zouma aha mbụ "Kurt" mgbe Kurt Sloane, agwa Jean-Claude Van Damme na fim 'Kickboxer' na 1989, n'ihi na ọ masịrị nne na nna ya mgbe ha kirisịrị ihe omume ahụ na-akpali akpali na fim ahụ.
Aha etiti ya 'Obi ụtọ' kwekọrọ n'ọdịnala Africa nke iji okwu dị mma maka aha etiti.
A kpọrọ Kurt Zouma aha Kurt Sloane, àgwà Jean-Claude Van Damme na 'Kickboxer' (1989) Ebe E Si Nweta Foto: Enyo.
O nweghị egbugbu n'oge a na-ede akwụkwọ, ahụbeghịkwa ya ka ọ na-a drinkingụ mmanya ma ọ bụ na-ese anwụrụ.
Kurt Zouma enweghị akara ọ bụla n'oge ederede. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Banyere okpukpe ya, Zouma bụ onye Alakụba na onye raara onwe ya nye na nke ahụ. Ọzọkwa, ọ na-ekpe ekpere ugboro ise kwa ụbọchị ma hụ ya ka ọ na-aga njem uka na August 2018.
Kurt Zouma na njem njem Paul Pogba na ndi enyi. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata anyị Kurt Zouma gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Vladimir Coufal Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Benrahma Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ